एउटै केन्द्रमा १९ जना क्रीयापुत्रीले गरे मतदान- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ - कान्तिपुर समाचार
एउटै केन्द्रमा १९ जना क्रीयापुत्रीले गरे मतदान
मंसिर २१, २०७४ मेनुका ढुंगाना
अछाम — मंगलसेन नगरपालिका ५ को भाटवाडाका १९ जना क्रीयापुत्रीले मतदान गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो बुवा रते भाटको क्रीया बसेको ५ औं दिनमा मतदान गरेका हुन् । रते भाटका १९ छोराले मंगलसेनमा रहेको शोडषा मावि मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका हुन् ।
‘आफूले दिएको मतले देश विकास मात्र होइन, बुवाको आत्माले गाउँ ठाउँको विकास देखेर शान्ति पाओस् भनेर मतदान गरेका हौं,’ क्रीयापुत्री तुलाराम भाटले भने ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १८:३५
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १८:१५
मासु खाने काइदा
कुमार चालिसे आश्विन ३०, २०७५
दसैं ठूलाबडा, मान्यजनको हातबाट रातो टीका र आशिर्वाद थाप्ने र मिठोमसिनो खाने पर्व हो  । यो पर्वमा ऋण काढेर भए पनि नयाँ लुगा लगाउने...
कल्पना धमला आश्विन ३०, २०७५
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै भन्नुभएको थियो, ‘महिलाहरू रातको १२ बजे पनि एक्लै हिँड्न सक्छन्  । ’ तर नयाँ सरकार बनेयता बालिका बलात्कार भएको घटनामात्रै...
दिवाकर बागचन्द आश्विन २९, २०७५
आमाको कुरा गर्दा पाकिस्तान को नाम ? पाठकहरुलाई अलि अनौठो लाग्ला । संयोग भनौं गोर्कीको आमा पछि मैले एउटा आमाको आँशुको बारेमा कविता पढ्ने अवसर...
सम्पादकीय आश्विन २९, २०७५
पश्चिममा हलिया भनिन्छ  । पूर्वमा हरुवा  । पश्चिममा हलिया भनिन्छ । पूर्वमा हरुवा । जे भने पनि यी साहुका जग्गा जोत्ने भूमिहीन किसान हुन् । बाजेको पालामा...
धन्य हो, जनमत !
कृष्ण खनाल आश्विन २९, २०७५
काठमाडौं– ७ बाट संसद छिर्ने वामदेव गौतमको हुटहुटीले तरङ्गित उपचुनावी चर्चा आकार लिन नपाउँदै तुहियो  । यसलाई सञ्चार प्रविधिमा सामाजिक सञ्जालले ल्याएको अभूतपूर्व विकासको...
प्रा. तारानिधि भट्टराई आश्विन २९, २०७५
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बहस जोडतोडले चलिरहेको छ । भौतिक संरचना निर्माणका लागि निर्माण सामग्री कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा भने नीति निर्माता मौन छन् । नागरिक समाज र...